Faits-Divers – Page 1198 – Midi Madagasikara
Redaction Midi Madagasikara 10 mars 2014 Ambohitrimanjaka mpangalatra omby, Anosibe voatifitra, Arivonimamo lozam-pifamoivoizana
# – Ambohitrimanjaka. Any am-ponja ilay mpangalatra omby. Fantatra izao fa taorian’ny nitondrana azy teny amin’ny fitsarana dia nampidirina am-ponja vonjimaika ilay lehilahy tratra nangalatra omby teny Ambohitrimanjaka. Ny voavoa no nahalalana fa efa nigadra noho ny halatra hafa nataony ity olona ity. # – Arivonimamo. Olona dimy naratran’ny lozam-pifamoivoizana. Fiara mpitatitra iray nitondra mpiantsena…
Antsirabe : Mpamaky trano 8 voasambotra, 2 tratra ambodiomby
Redaction Midi Madagasikara 10 mars 2014 Antsirabe, mpamaky trano
Ravan’ny mpitandro filaminana indray ny andian-jiolahy mpamaky trano teto Antsirabe. Valo mianadahy no voasambotry ny polisy ny faran’ny herinandro lasa teo. Tato ho ato, saika ho isan-kerinandro, dia nahitam-bokatra hatrany ny asan’ny mpitandro filaminana. Nirongatra izay tsy izy mantsy ny vaky trano teto Antsirabe, indrindra hatramin’ny niandohan’ny volana febroary lasa teo. Anisan’ny lasibatra tamin’izany ny…
Soavinandriana Itasy : Lasan’ny jiolahy ny 6 tapitrisa ariary
Redaction Midi Madagasikara 10 mars 2014 Soavinandriana Itasy
Ny sabotsy lasa teo, tonga nanafika tany amin’ny faritr’i Soaviandraina ny andian-jiolahy miisa sivy ary nirongo basy. Avy hatrany dia napoakan’izy ireo ny basy teny aminy ka samy toran-kovitra daholo ny mponina. Noteteziny ny tanàna ary voalaza fa niantso mafy izy ireo nanao hoe “aiza ny vola?”. Ny vaovao voaray hatrany no hilazana fa tsy…
Bekily : Zaza 5 taona naolan’ny dahalo imason-dreniny
Redaction Midi Madagasikara 10 mars 2014 Bekily, naolan’ny dahalo, Zaza
Zava-doza ary tsy mifanditrovana ny dahalo amin’izao. Tany Bekily dia zaza dimy taona no saika maty naolan’ny malaso teo imason-dreniny. Tezitra ireo olon-dratsy satria tsy azon’izy ireo ny vola aman-tapitrisa tao amin’ilay tokantrano notafihany, satria mbola tsy voarainy tompon-trano ny vidin’omby. Tezitra ireo jiolahy ka ilay zaza tsy manan-tsiny no nanamparana ny haromotany novetavetaina teo…
Andavamamba : Fivarotana roa notafihana 5 lahy nirongo basy
Redaction Midi Madagasikara 10 mars 2014 Andavamamba, nirongo basy, notafihana 5 lahy
Ny zoma hariva tokony ho tany amin’ny 7 ora tany ho any, nirefotra ny basy teny Andavamamba amin’ilay lalana vita rarivato mandeha mianatsimo iny. Mpivarotra roa no notahifana jioilahy miisa dimy nirongo basy kalach. Ny iray fivarotan-kena ary ny faharoa mpivarotra enta-madinika. Teo amin’ilay mpivarotra enta-madinika ry zalahy no nandeha voalohany. Nokendreny tamin’ilay fotoana tsy…
Antsiranana – Fanafihana mpiantra CEG PK3: mpainatra 6 no voatsatoka antsy
Redaction Midi Madagasikara 8 mars 2014 Antsiranana, Fanafihana mpiantra
Mpianatra 6 no naratra ny alakamisy teo, vokatry ny fanafihana ny CEG PK 3. Voatsindrona antsy avokoa izy ireo. Tokony ho tamin’ny 9 ora maraina no nitrangan’io fanafihana io, raha variana tamin’ny fitokonan’ny mpianatry ny oniversité ny mpitandro ny filaminana. Araka ny fanadihadiana natao tamin’ny mpampianatra dia efa nisy andian-jatovo efa nihaodihaody teo amin’ny sekoly…
Betafo : Zaza roa volana, novonoin’ny reniny
Redaction Midi Madagasikara 8 mars 2014 Betafo, Zaza novonoin’ny reniny
Teo am-pandevenana ilay zaza menavava no saron’ny polisy avy ao Betafo ilay renim-pianakaviana namono ny zanany vao roa volana monja. Tamin’ny talata 4 martsa lasa teo no nitrangan’ity loza mampihoron-koditra tao antampon-tanànan’i Betafo ity. Olona tsara sitra-po no nilaza tamin’ny polisy fa misy ramatoa iray namono nahafaty ny zanany. Tsy niandry ela ny polisy vantany…
Oniversiten’Antsiranana : Misy voasambotra ireo nitokona
Redaction Midi Madagasikara 8 mars 2014 Oniversiten’Antsiranana, voasambotra ireo nitokona
Nanapa-kevitra hidina andalam-be ny mpianatry ny oniversité omaly. Efa naheno izany anefa ny mpitandro ny filaminana iny alina iny ihany. Natao ny fifampiraharahana tamin’ny “telephone”, mba tsy hidinan’izy ireo amin’izany. Tsy nisy nihaino ary tsy neken’ny mpianatra izany. Niroso ihany ny fidinana omaly ka voatery noravan’ny mpitandro ny filaminana, tamin’ny alalan’ny baomba mandatsa-dranomaso. Mpianatra enina…
67 ha : Arrestation d’un Mauricien dealer d’héroïne!
Redaction Midi Madagasikara 8 mars 2014 67 HA, Arrestation d’un Mauricien, dealer d’héroïne
Il est muni d’une fausse carte d’identité malgache et habite à Ambohitsoa Itaosy. Son métier : dealer d’héroïne. Un Mauricien du nom de Oudin David Jairzinho a été arrêté par la police en possession de deux grammes d’héroïne qu’il allait livrer à une personne. Il ne savait pas que l’acheteur est, en réalité, un élément de…
Toliara II : Ramatoa nangalatra mangahazo misy kalo, nivoaka nana ny vatany
Redaction Midi Madagasikara 8 mars 2014 Toliara II
Ramatoabe iray noteren’ny hanoanana, nangalatra mangahazon’olona teny an-tsaha, tany Fihenena Masay, Toliara II, ny fiandohan’ity volana martsa ity, no nivadika horera sy niova endrika. Nivonto avokoa ny tanany sy ny tongony ary tsy nisy nahafantarana azy ny tarehiny iray manontolo. Tsy vitan’izay fa nitsonika sy nivoaka nana sy mamofona koa ny faritra sasany ary efa…
← Previous 1 … 1 197 1 198 1 199 … 1 264 Next →